#update #NNER #မှထပ်မံကြေငြာချက်ထုတ်ပြန်ပြီး #NLD #ပါတီကိုတုံ့ပြန်. . ။ | democracy for burma
#update #NNER #မှထပ်မံကြေငြာချက်ထုတ်ပြန်ပြီး #NLD #ပါတီကိုတုံ့ပြန်. . ။
tags: ပါတီကိုတုံ့ပြန်., ကြေညာချက်အမှတ် ၁/၀၂/၂၀၁၅, ကြေညာချက်အမှတ် ၂/၀၂/၂၀၁၅, Burma, Myanmar, national edu law, NLD, NNER, respond, statement, student protest march
NNER မှထပ်မံကြေငြာချက်ထုတ်ပြန်ပြီး NLD ပါတီကိုတုံ့ပြန်. . ။
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ကြေညာချက်အမှတ် ၂/၀၂/၂၀၁၅ ထုတ်ပြန်ခြင်း။
၁။ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်သည် ၂၊၂၊၂၀၁၅ ရက်နေ့တွင် ကြေညာချက်အမှတ် ၈/၀၂/၂၀၁၅ ကိုလည်းကောင်း၊ ကြေညာချက်အမှတ် ၁/၀၂/၂၀၁၅ ကိုလည်းကောင်း ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါသည်။
၂။ ကြေညာချက်အမှတ် ၁/၀၂/၂၀၁၅ အစား ကြေညာချက်အမှတ် ၈/၀၂/၂၀၁၅ ကိုထုတ်ပြန်ဝေငှမိခြင်းသည် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ဗဟိုရုံး၏ စီမံခန့်ခွဲမှု ချွတ်ချော်မှုကြောင့်ဖြစ်ပါကြောင်းနှင့် ကြေညာချက်အမှန်မှာ ၁/၀၂/၂၀၁၅ ဖြစ်ပါကြောင်း ထုတ်ပြန်ကြေညာအပ်ပါသည်။
ideological standpoint ဆိုတဲ့ အယူအဆရေးရာ ရပ်တည်ချက်မှာ .. ကျောင်းသားသပိတ်ကြီး တစ်ခုလုံးရဲ့ Linch Pin ဆိုတဲ့ အတွေးအခေါ် တည်ဆောက်မှု အင်အားအဖြစ် မားမားမတ်မတ် ရပ်တည်ပေးမှုမှာ အရေးပါခဲ့သူဟာ ဒေါက်တာသိန်းလွင် … ဒါမှ မဟုတ် NNER ပဲ။
ဒါကို ကြည့်နိုင်ဖို့ လိုမယ်။ အဲဒီ Linch Pin ဟာ NLD နဲ့ တွဲနေတယ်။
ဒီတော့ Linch Pin ကို ဖယ်ထုတ်နိုင်ဖို့ NLD ကို တွန်းလိုက်ရင် NLD နဲ့ အတူ ချိတ်ထားတဲ့ Linch Pin ပါ … ပါသွားနိုင်တယ် ဆိုတဲ့ အဖြစ် မဖြစ်စေဘဲ … သူ့ဘာသာ အားရှိရှိ ရပ်တည်နိုင်အောင် ချိတ်ထားတဲ့ ကြိုးကို ဖြတ်ထုတ်လိုက်တာလို့ပဲ .. မြင်မိတယ်။
(ကိုထိုက်) Ko Htike
NLD က ဒေါက်တာသိန်းလွင် နဲ့ပတ်သက်တဲ့
NLD ရဲ့ အရိပ်ကင်းရှင်းပါကြောင်း
နဲ့ NLD ကကြိုးကိုင်ဆာင်ရွက်နေခြင်း
Fb မှာကျနော်တို့ ပုံလေးတစ်ပုံယူသုံးချင်တယ်
အကယ်၍. . .
ခွင့်မပြုခဲ့ဘူးဆိုရင် . .
တွေ့ပြီးမှ သဘောထားမှတ်ချက်ပေး ဘို့
NlD ရဲ့ သမိုင်းကြောင်းနဲ့ ချိန်ထိုးပြီး
← #Thailand # MaeSot #Special #Economic #Zone #plan
#UPDATE #၉-၂-၁၅ #Nay #Myo #Zin ၂.၂.၂၀၁၅ #ရက်နေ့တွင် #မတရားဖမ်းဆီးခံရသော #ကိုနေမျိူးဇင်နှင့်အတူကိုတင်ထွဋ်ပိုင်၊ဦးသန်းဆွေ၊ ဒေါ်နော်အုံးလှ၊ဒေါ်စိန်ဌေး၊ →
Top Posts	Ko Jimmy and his Wife Nilar Thein, Myanmar Famous Couple of Political Prisoners Release Their Poem Book-video	Myanmar Sedona Hotel :နာမည်ကြီးနေသည့် ဆီဒိုးနားဟိုတယ် ဗွီဒီယို အပိုင်း(၁) ထွက်လာ၊ ဗွီဒီယိုထဲတွင် ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင်လား၊ လူကြီးသားလား မကွဲပြား (18 + Video File)	#BURMA #MYANMAR #BUDDHISTS #DONT #WANT #GET #KILLED BY #RADICAL #MUSLIMS AS IN #SOUTH #THAILAND #တိုက်ပွဲ #Update #သတင်း #WAR #NEWS #TNLA #FIGHTING #BURMESE #ARMY #20/1/2015	#Burma #Myanmar #army #killing #shan #villagers -#warning #graphics	MYANMAR -BURMA WANTED:He create group and kill visited Monk in Meik Thi Lar .	Karen Refugees from Thailand get warm welcome from Karen Community in Japan-pics	#MURDER #RAPED #GIRL #LIST #State #Railway of #Thailand,	#เลดี้โบกี้ #ตู้โดยสารคันนี้ของ " #เด็กและสตรี"	The bomb exploded in the7Star Restaurant next to the Shwe Tadar Guest House near the Friendship Bridge	88 students